December 8, 2020 Dai 8, 2022 0
Iyo Fitbit Versa 2 inokodzera kusimudzira asi kushomeka kweGPS kunoidzosera kumashure
Pros Inotaridzika inonakidzaBalanced seti yezvinhu Iyo Fitbit app yakanaka Makoni Hapana akavakirwa-GPSHapana offline Spotify kutamba
Panguva yekuvhurwa kwayo, iyo Fitbit Versa yakaratidza kuve muhombe mari-spinner yekambani yaive ichinetseka kuenderana nenyika yanhasi yezvipfeko. Fitbit yaive kambani yaisvinwa kubva kumativi matatu: iyo inodhura Apple Watch, zvakachipa zveChinese zvekusimba mabhendi senge Xiaomi Mi Band, uye nemawachi ekumhanya akazvipira kubva kuGarmin nePolar.
Iyo yakawandisa yakawanda-ruoko-yakatendeuka yakatenderedza hupfumi hwekambani, kuchichipa chikamu chayo chekutanga chemubatsiro mumazera. Zvichida hazvishamise kuti iri kutarisira kudzokorora hunyengeri ne sequel: iyo Fitbit Versa 2.
Fitbit Versa 2 ongororo: Izvo zvaunoda kuti uzive
Kana isina kutyorwa, usazvigadzirise zvinoita kunge mantbit main mantra neiyo Versa 2, sezvo kambani ichiedza zvakaoma kugadzirisa zvine mwero izvo zvisingatsamwise kufarirwa kwechigadzirwa.
Izvi zvinoreva kuti iwe uchiri kutarisa kuchinhu chinoedza kuyedza musiyano uripo pakati pewatchwatch uye kugwinya tracker. Matanho nezviitiko zvinotora kumberi nepakati, uye zvese zvinobatana mushe pamwe neakanaka Fitbit app, asi zvakare ine zviziviso uye inoita sebhiriji kubva parunhare kusvika pachiuno.
Saka chii chitsva? Zvinhu zvitatu zvinobuda pachena. Kutanga, iyo skrini yave ikozvino OLED, pane iyo LCD yekare. Izvi zvinoreva zvakadzika zvitema uye zvine simba mavara asi zvakare zvinogona kubatsira mukuvandudza kwechipiri: hwakagadziridzwa hupenyu hwebhatiri Fitbit anoti iyo modhi nyowani inogara kwemazuva mashanu, pane mazuva mana pamwe neyekare modhi.
Chekupedzisira, iyo Fitbit Versa 2 ine yakavakirwa-mukati maikorofoni yekutaura neAki. Ehe, mubatsiri weAmazon chaiye ikozvino chikamu chepakeji, achikurega iwe uwane zvinhu nesimba rezwi rako.
Zvichiri kushayikwa mukuita: GPS. Pane kudaro, iyo Fitbit Versa 2 piggybacks kubva pafoni yako. Kana iwe uchida Fitbit ine GPS, iwe unoda iyo Ionic kana iyo refu-yakamiswa, uye chunky, Surge.
Fitbit Versa 2 ongororo: Mutengo nemakwikwi
Iyo Fitbit Versa 2 inotengesa pamadhora mazana maviri. Ndiyo £ 200 yakaderera pane iyo GPS-inotora Fitbit Ionic, kunyangwe ichinyatso kuitika inogona kuwanzo shomeka. Pano iri ye $ 211 kuAmazon. Kumwe kunhu, kune iyo Fitbit Versa Lite: ine mwero yakatemwa-yakatemwa vhezheni yeiyo yekutanga Versa iyo inosvika $ 150 asi, zvakare, inogona kazhinji zvinotengwa zvakachipa.
Iyo £ 200 yemutengo poindi yeFitbit Versa 2 inoipa imwe makwikwi akaomarara, hazvo - kunyanya kubva kumhanya mawatch, ayo anowanzo gonesa kusunga GPS yemutengo. Iko kune Garmin Vivoactive 3 Music, inova yakanaka kutenga pa £ 180. Iyo Polar Ignite inodzingirira chiitiko cheVersa, zvakare, asi yakapotsa chiratidzo. Kunyange zvakadaro, ndizvo yako ye £ 180Pakupedzisira, kune Apple Watch, chizvarwa chechitatu chingaveyaive nemutengo wekutenga we £ 200.
Fitbit Versa 2 ongororo: Dhizaini
Dhizaini yeFitbit Versa yaive imwe yemasutu ayo akasimba, uye iyo nyowani inokwezva - kutaura zvazviri, ini ndinofunga yakashongedzwa seApple Watch, iine kumeso kwayo kwakatetepa, mativi akapfava akatenderera uye bhatani rimwe chete, risingasviki.
Zvinotonyanya kushamisa kuti inotaridzika sei paruoko, nekuti kune imwe nhanho kutaridzika kwayo kwakanaka kunyepedzera. Chekutanga pane zvese, iri 12mm gobvu, isinganzwike senge yakawanda, asi izvo zviri chaizvo nezve 50% kupfuura yako yepakati smartphone. Nekuda kwenzira yarinopinda mukati, zvakadaro, rinotaridzika kunge rakatetepa kupfuura zvariri uye hauzove wakachenjera kana iwe usina kutora tepi kuyera kwariri.
Chechipiri, kana ukanyatsotarisisa uchaona iyo Versa 2 iine bezel rakakora pese pese pakatenderedza sikirini - asi nekuti iyo kumashure kune nhema pane yega menyu, iwe unongo nyatso kuona izvi muchiedza chezuva. Muchidimbu, Fitbit aita basa rine hunyanzvi rekuvanza kutadza kwekukanganisa nenzira yekuti chete rufaro rwekuuraya seni ruchabuda munzira yake kutsvaga. Bravo, Fitbit.
Yakagadzikana, zvakare, netambo dzinogona kutsiviwa kana iwe uchida kusanganisa zvinhu zvishoma. Ndanga ndakapfeka salmon pink uye ndakasimuka nhamba yegoridhe Fitbit yatitumira, iyo yakasimudza tsiye shoma kubva kushamwari uye mhuri sezvo iri zvishoma kunze nedanho rangu remavara palette, asi ini ndingadai ndakachinjisa zvinhu zviri nyore zvakakwana.
Pakupedzisira, zvakakodzera kutaura chimwe chinhu nezve tekinoroji nyowani. Kutamira kuOLED inyanzvi nekuti inowedzera zvinhu zviviri zvakakosha. Kutanga chiratidziro chenguva dzose-chinoreva kuti haufanire kufambisa ruoko rwako kuti uverenge iyo nguva kana kuona nhanho dzako zvishoma. Haisi yekusavapo, nekuti Fitbit inoti inoderedza hupenyu hwebhatiri nezuva asi izvo zvinondiunza kune iyo yechipiri poindi: OLED zvinoreva kuti bhatiri rinogara kwenguva yakareba zvakadaro, kubva 'mazuva mana zvichikwira' pane yapfuura modhi kune 'mazuva mashanu kuwedzera 'pane iyi vhezheni.
Uye chidzitiro chakanaka, futi. Iyo 300 x 300 resolution yakanyanya kupinza zvakakwana kuratidza ratidziro yakajeka uye inotonhorera yemifananidzo uye iwe unogona kugara uchiona izvo zviri pachiratidziri nekukanda.
Fitbit Versa 2 ongororo: Performance
Iwo ma vibes akanaka anoenderera mukuita, neiyo Versa 2 nekushingairira kuteedzera yako chiitiko sezvaunofamba. Matanho anoverengwa, zviziviso zvinoputika uye kana iwe uchida kuwirirana zvakanyanya nazvo, ipapo mimhanzi, kurovedza muviri, kufema uye mamwe maapplication ingori swipe kure. Iyo Fitbit Versa 2 inowanzoonekwa uye haina kunzwika, uye izvo zvakanyatsonaka.
Fitbit Versa 2, Hutano & Fitness Smartwatch neIzwi Kudzora, Kurara Chikamu & Mumhanzi
Fitbit Versa 2 Hutano uye Kusimba Smartwatch ine Moyo Rate, Mumhanzi, Alexa Yakavakirwa-mukati, Kurara uye Kutamba Kutevera, Bordeaux / Copper Rose, Imwe Saizi (S uye L Mabhendi Akabatanidzwa)
$177.95 Tenga izvozvi
Iyo inowana kunyange nzvimbo yekuhwanda iyo chaiyo Amazon mubatsiri Alexa mune ino nguva, zvakare, ine maikorofoni padivi peiyo wachi. Batisa pasi bhatani uye iyo logo yeAllog ichatanga kuratidza kuti iri kuteerera. Bvunza mubvunzo uye wozo, mushure mekapfupi "kufunga ..." meseji, mhinduro kumubvunzo wako inonyorwa pachiratidziro kuti iwe uverenge.
Pane zvisingabvumirwe pane izvi. Iwe haugone kuibvunza kuti iridze mimhanzi paSpotify, semuenzaniso, kunyangwe hazvo iyo app iripo pane yakatarisa. Asi iwe unogona kuiwana yekuisa nguva uye kudzora smart zvinhu zvepamba - ini ndakakwanisa kubatidza uye kudzima mamwe mwenje kubva pachiuno. Kupusa, asi zvakashanda.
Pakazara, inoshanda mushe mushe, kunyangwe ini ndisina chokwadi chekuchinja mutambo, sezvo musiyano uripo pakati pekubvunza mubvunzo uye kuwana mhinduro chaiyo wakareba zvakakwana kuti vanhu vazhinji vangangochera mafoni avo nekuda zvakadaro. Asi iriko, uye sekuwedzera maficha kuenda, yakanaka freebie ini ndinofunga.
Iwe unotova nesarudzo yekuita bhatani rinokonzeresa Alexa kana Fitbit Pay - chero ipi yaunosarudza kusashandisa inoiswa kune kumwe kushushikana kutsvaira kana iwe uchida kuishandisa. Asi chokwadi hachisi kana chinouraya chimiro. Nepo pfungwa yekubhadhara zvinhu kubva pachiuno ichiyedzwa uye kuyedzwa, Fitbit Pay ine rutsigiro rwakadaro rusina simba muUK kuti mikana yacho hausi kuzoishandisa (kunze kwekunge uri bhengi neSantander).
Rutsigiro rweapp rwuri kukura uye zvakanaka kuona Fitbit ichisunga zvese zviri zviviri Strava uye Spotify padivi payo yekutanga-bato maapplication, kunyangwe iyo yekupedzisira iri kure yekudzora yekutamba kwefoni, pane kuita yakazara-yakavakirwa-mumhanzi mutambi. Ehe, iwe unogona kuwedzera maMP3 ako, asi mune ino yekutangisa-yekutanga nguva, izvo zvichiri zvishoma zvekudzosera kumashure. Kunyangwe zvirizvo, uchipiwa kushomeka kweGPS iwe uchafanirwa kutora foni yako newe kana uchimhanya kana kutenderera zvakadaro, saka haisi dhiri-breaker seakadaro.
Izvo zvakati, yakavakirwa-mukati GPS inofanirwa kune vamwe uye ndinonzwirana tsitsi nemaonero aya, kunyanya mushure mechiitiko che piggybacking ndoga yangu Huawei P20 Pro. Kujekesa, hunyanzvi hweHuawei hune hutsinye-hwekuchengetedza bhatiri hwunoziva nezvezvipfeko zvakasiyana-siyana (pro tip: isa widget yeFitbit pane yako Android skrini yekuchengetedza kuti irarame) asi zvakakosha kuyeuka kuti uri munyasha dzefoni yako pano uye kana iwe uchiziva kuti ine isina kusimba GPS saka iyi inogona kunge isiri iyo wachi yako.
A akati wandei kesi mune poindi. KuSutton Coldfield parkrun, kwandakawana ini vhiki ino, iyo Versa 2 yakayera kosi yacho se5.15km. Weirdly yakati 5.25km pawatch, asi yakagadzirisa zvinhu kusvika pa5.15km payakabatana neapp yaFitbit. Ose ari maviri aive asiri iwo, zvakadaro, uye zviripachena izvi zvinokonzeresa matambudziko kana iwe ukashandisa epakati-kumhanya manhamba kugadzirisa ako nhanho.
Seyedzo yechipiri, ndakaiburitsa ndichimhanya munzira yakajairika kutenderera nharaunda yangu iyo Mapometre inoyera se5km chaiyo. Fitbit akati ndakaita 4.74km panguva ino, achindipa avhareji nhanho yainonoka kupfuura zvandakanyatsoita. Icho chikonzero cheichi chiri pachena pachena kana iwe uchichera mune iyo mappa data:
Zvakaringana kuti nditi ndanga ndakanamatira pakarongedzwa, asi data racho rinondicheka makona mahombe, ndichimhanya nedzimba nemabindu.
Zvekare, izvi hazvireve kuti imhosva yaFitbit asi zvinotsanangudza njodzi dzekuvimba nedata refoni pane kusunga chip chip GPS. Kana iwe usingakwanise kuvimba nefoni yako GPS uye uri mumhanyi wakakomba, saka iyo Fitbit Versa 2 ingori isiri yako.
Fitbit Versa 2 ongororo: Fitbit Premium
Chekupedzisira, izwi diki paFitbit Premium: sevhisi yekusarudzika iyo inovhura boka rezvimwe zvinowedzera mukati meakanakisa Fitbit app, ye £ 7.99 pamwedzi kana £ 79.99 yegore kana iwe uchibhadhara kamwe chete. Izvi zvingaite kunge zvakawanda, asi zvinoita kuti iyo app inyanye kumanikidza, ichikupa: inotungamirwa vhidhiyo uye odhiyo yekurovedza; maonero akasarudzika muhupenyu hwako anotora kubva pawatch; uye nani zvirinani maonero ekuti hope dzehusiku hwega hwega dzinoparara sei.
Nyeredzi yechiratidziro hapana mubvunzo mashandiro anotungamirwa, ayo anopa wega murairidzi achikuratidza maitiro ekuita akasiyana maekisesaizi uye achikutungamira kuburikidza nawo. Pane huwandu hunonetesa hweizvi, imwe neimwe inoratidza kuti zvinotora nguva yakareba sei uye kuti mangani macalorie aunotarisira kupisa. Iyo yekurovedza muviri uye yekumba-based inopa vhidhiyo (iyo inogona kukandirwa kune hombe skrini) nepo uchimhanya uye uchifamba iwo anopa mimhanzi uye mazwi ekukuchengetedza iwe kukurudzira uye kukutungamira iwe kuburikidza neichi chiitiko. Izvo chaizvo zvinoyevedza.
Haisi yekurovedza muviri chete, zvakadaro. Fitbit Premium zvakare inopa anotungamirirwa zvirongwa zvekukubatsira iwe kurara zvirinani, uye kunyangwe kukanda munyu kana shuga nemazano ezvekudya kumba nekunze kwemba kuzadzisa zvinangwa zvako.
Izvo zvese zvinogamuchirwa, asi zvakakosha £ 79.99? Zvizhinji zvechiitiko zvinoita kunge zvakatemwa kubva pawachi pachayo, saka zvakaoma kutaura. Unogona kusarudza kuti mamwe maapplication anogona kupa zvikamu zvaunoda pamutengo unokwikwidza, asi hapana kana chaungarasikirwa mukusaina kuzuva kwemazuva manomwe emahara. Ingo ita chokwadi chekurangarira kukanzura usati wabhadhariswa kana zvisiri zvako
Fitbit Versa 2: Mutongo
Kwandiri, iyo Fitbit Versa inoshungurudza padyo nekushamisa asi ini handina kukwanisa kuiita yangu yekutarisa pasina GPS chip. Zvinonyadzisa kuti kambani haigadzi Versa 2 Pro ine GPS yakavakirwa mukati, nekuti zvakanakisa kutarisa nekushandisa kupfuura iyo Fitbit Ionic.
Sezvazvinomira, zvinogona kunge zvichakugadzirira iwe. Kana yako foni yefoni iri kumusoro kwebasa racho, saka iyi inoshamisa mitambo ine smartwatch. Inotaridzika kunge yakanaka, inogara kwemazuva uye inobatsira kubva kune yakanakisa Fitbit app. Kunyangwe ini ndichikahadzika kudiwa kweAlex pachiwoko chako, iyo OLED skrini inoita kuti ive inokodzera mutsivi kune smartwatch iyo yakadzosera Fitbit pamepu.